सिसि गमला कमरेड प्राणडण्ड का एकदिन अचानक पुग्दा - Madhesi Youth
October 18, 2015 October 18, 2015 Kishor Kundan0Comment #Humor, Kishor Kundan
सिसि गमला एक दिन कमरेड प्राणडण्ड काँहा बिहानै पुगे छन्। कमरेड फोनमा कुरा गर्दै गमलालाँई स्वागत गरे।
गमला अनुमान लाउँदै थिए कमरेड को सँग कुरा गरि रहेका छन् भनेर। कमरेड एकदम मधुर आवाजमा बोलि रहेका थिए। गमलाले यति मात्रै अनुमान लाउन सके कि कमरेड हिन्दीमा वार्तालाप गरिरहेका छन्।
फोन सकिने बितिक्कै गमलाले सामान्य तरीक़ाले सोधे, “मधेशी नेत्रीत्वका कोई थिए कि ?” कमरेड केही बोल्न चाहनु भएन। यो बुझदै गमलाले चियापानी खाँदै सामान्य रुपमा केही ठटा गरे।
सामान्य कुरा चलिरहेको बेला कमरेडको फोन ४-५ पटक आयो। फोनमा वार्ता हिन्दीमै भई रहेको थियो। गमलाले यति अनुमान लाई सकेका थिए कि वार्ता औष्धी र रोग सम्बन्धित थियो। गमलाको उत्सुक्ता र जिज्ञाशाले पराकाष्टा नागी सकेको थियो। गमलाले फेरी प्रयत्न गरे कुरा चलाउने।
गमला – कमरेड कुनै गम्भीर चिन्तामा हुनु हुन्छ कि ?
कमरेड – अब जिवननै राष्ट्रमा समर्पण गरि सकेको मान्छेको सबै कुरा गम्भीर हुन्छ।
गमला – मेरो अनुमानमा केही स्वास्थ्य सम्बन्धित् हो जस्तो लाग्यो।
कमरेड – तपाँईले छोड्नु हुन्न, म आँफै भन्छु तर यो सार्वजनिक नगर्नु होला।
गमला – हामी पनि बुझ्छौं कमरेड सबै कुरा सार्वजनिक गर्नु हुँदैन, तपाई चिन्तै न लिनुस्।
कमरेड – मलाई आजकाल कब्जियत् को समस्या फेरी आएको छ। यहि सन्दर्भमा बिदेशी राजदूत सँग कुरा गर्दै थिए।
गमला – राजदूतले कुनै घरेलू उपचार बताए कि ?
कमरेड – होईन्, होईन्, राजदूतले केही परामर्श दिनु भएको होईन्। उहाँले आफ्नो समस्या बताँउदै हुनु हुन्थ्यो, आज भोली उहाँहरुकै बिदेश मन्त्रालयले अलिक कड़ाई गरेछ रे।
अलिक कुटनिती गरेर दुतावासकै कोष बाटै औष्धी मिल्छ कि भनेर मैले कुरो हाल्दी हालें, राजदूतले VAT bill प्रस्तुत गर्नुस अनि म दुतावासकै कोष बाट पैसा चुक्ता गर दिन्छु भन्नु भयो तर अहिले अन्तराष्ट्रीय हवाई उड़ान नभएकोले औष्धी चाही मगाँई दिन उनी असक्षय्म छन्।
गमला – साईकल चढ्न त निकै गार्हो होला त, होईन् ?
← Contextualizing Madhesi Frustration
Aadarsh Madheshi – 101 →